SOMALILAND .. AMANKAAG IYO YAAB. |
SOMALILAND .. AMANKAAG IYO YAAB.
Waxan aad u xusuusta duruufihii dalkan iyo dadkan reer Somaliland ay soo mareen, waxan arkaa halka aynu manta taagnahay iyo haddii aynu sida wanaagsan wax u eegno halka aynu gaari karo waqti yar, waa haddii aynu adeesanayno aqoon iyo daacadnimo taas oo salkeedu ama hamigeedu yahay wax u qabashada dalkaaga iyo kor u qaadida dadkaaga dhinac kasta haday tahay xag aqooneed , xag dhaqan iyo dhqaqaaleba.
Waan arkee ma aragteen
Haddaba, waxaynu aragnaa in qabiilnimadii ama jahligii uu ka dheeraynayo dawladnimaddii , waxad mooda degaanaddii wadanka in qabiil waliba meel ka doobinayo oo dhibi lisanayo.
Waxad arkaysaa oday, wax garad iyo dhalin yaro waxa laga hadlayo ay ku salaysan yihiin dib u dhac keliya .
Waxad arkaysaa qaar shirar qabiil qabsanaya, qaarkaloo ku baaqaya , waxadna ogaanaysaa in natiijada ka soo baxdaa ay tahay mid isku wada mid ah taas oo ah “ qadiyada Somaliland waa lama taabtaan iyo beelaha aanu wada degno inanu nabad ku wada noolano” …… Hadda la soco oo qaadka lagu cunay meesha wuxu gaadhaya boqolalkun oo dollarka maraykanka ah waxana loo diray itoobiya . halkaa waxad ka ogaanaysaa marka qabiiladeenu ay shirar qabsanayaan inuu suuqa itobiyana cirkaa marayo.
Ha ilaawin adigaan meel kale tegin , reerka ugu dhow halka shirka lagu qabananyo waxa laga yabaa inanay sadexda waqti wax ba cunin. Waa yaabka yaabkiisa.
Tallo ku socota reer Somaliland
1- Madax dhameedka:
Odayaashii wadankaa tihiin , mid shicib ah , mid dawlada ku jiraba idinkaa u
madax dhaqameed ah. Waxana aad u fiican in aad joojisan shaashadaha ka soo baxaysaan meel aad joogtaanba, hoosna wax u dhameeyesaan xaga dhexdiina ah, xaga reeraha iyo xaga dawladaba. Dadkana ka dhaadhiciya dhulka inan la kala lahayn oo ninka reer Somaliland ahi uu meelkasta degi karo.
Aqoonta aad barateen waa inay isbedel idin ku samaysaa , waa inand dhalinta ka wacyi gelisaan xumaanta qabyaalad , waan in dhalintu is dhexgal samaysaa , waa inad kobcinsaan xaga ciyaaraha , waan ninka dhalin yarada ahi tagaa gobolada kuna yeesha saaxiibo. Waa in lays dhexgalaa xagga guurika iyo xaga degaankaba.
Sidan kor ku sheegay aqoon ay daacadi ku ladhan tahay iyo higsi ayaa horumarka lagaga midho dhalin karaa. Waxa loo baahan yahay aqoonteedii waa inuu lee yahay qofku meeshu ka shaqaynayo, waa inan beelnimo waxba lagu qaadan.
Waa inaad kobcisaan maagashida , waa in ganacsada ku dhiirigelisan inay wershado yar yar furan, iyo maal geliyaan dadka shicibka xaga beeraha, kaluumaysiga, IWM,
Waa in la doonaa maal gashi caalami ah sida DP World iyo kuwa kale oo badan oo la mid ah,
si ay u abuurayaan fursado shaqaale iyo koboc dhaqaale.
Waxa loo baahan yahay dariiqa cad ama sawir cad iyo hisgsiga sida aad doonaysaan inay Somaliland u ekaato sanadahan dhow ee soo socda..
4-Shacabka Somaliland guud ahaan :
Waxaynu nahay ummad uu illahay abuuray, caqli siiyey , waxase la yaableh dhulkii illahay inagu abuuray iyo nimcaddii uu ina siiyey inaynu wax ka qabsano daaye qaar kamida waa gubaynaa sida dhirtii. Maxaa ka sii daran dhir wadan kalena lacagbaa lagu soo iibsanaynaa.
Reer Somaliland waxa inala gudboon inaynu tallo keeno waxaynuna u baahan nahay isbedel bulsho. Meel ina gaadhsiin mayso haddii aynu dawlad doonanyo ereyada sida, reer hebel , degaankaygii, iyo IWM waa marxalad aad u hoosaysa.
Waxa loo baahan yahay aqoon iyo aragti fog sidii wadankan iyo dadkan loo horumarin lahaa.
Dhamanteen aan u midawno sidaynu dadkeena faqriga uga sari lahayn, dalkeenana u horumarin lahayn ugana ilaalin lahayn wixii waxyeelaynaya.
Gabileynews marnaba masuul kama aha Aragtida dadka kale. Qoraaga ayaa xumaanteeda, xushmadeeda iyo xilkeda sida. waxa kaliya oo Gabileynews dhiirigalinaysaa, isdhaafsiga aragtida, canaanta gacaliyo talo wadaagga